४१ लाख नाघे कोरोना संक्रमित - Everest Dainik - News from Nepal
४१ लाख नाघे कोरोना संक्रमित
काठमाडौंः विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४१ लाख नाघेको छ । आइतबार बिहान ७ बजेसम्मकोे तथ्याङकअनुसार संक्रमितको संख्या ४१ लाख ७ सय २६ पुगेको छ ।
शनिबार मात्रै करिब ८९ हजार नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने ४२ सय ४८ को मृत्यु भएको छ । योसँगै विश्वभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या २ लाख ८० हजार ४ सय ३१ पुगेको छ ।
याे पनि पढ्नुस विश्वमा कोरोना महामारीः कहाँ कतिको मृत्यु र संक्रमित ? (सूचीसहित)
संक्रमितमध्ये १४ लाख ४१ हजार उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
सबैभन्दा बढी मृतक र संक्रमित अमेरिकामा छन् । स्पेन, इटली र युकेमा कोरोना संक्रमित २/२ लाख नाघेका छन् भने इटली र युकेमा संख्या ३०/३० हजार नाघेको छ ।
याे पनि पढ्नुस कोरोना आशंकामा ४ जना सेती अस्पतालमा भर्ना, आइसोलेसनमा राखियो
रसिया, फ्रान्स, जर्मनी, ब्राजिल, ट्रकी र इरानमा संक्रमित संख्या १/१ लाख बढी छ ।
कुन देशमा कतिको मृत्यु र संक्रमित ?
ट्याग्स: Corona World, कोरोना